ICloudya: Eyona Ndlela yeFowuni yeFowuni eNgcono | Iindaba zeGajethi
Unxibelelwano kwilifu luya kubakho kwintengiso. Banikwa njengethuba elihle kwiinkampani, kwinkqubo yotshintsho lwedijithali kunxibelelwano olo. Kule ntsimi kukho inkampani eme ngaphezu kwayo yonke, eyiNFON. Le nkampani inoxanduva emva kweCloudya, inkqubo yeefowuni yefu. Ndiyabulela kuyo, unxibelelwano lwenkampani lujongane nenguquko.
ICloudya ifuna ukuphucula unxibelelwano kwishishini kwiinkalo ezahlukeneyo. Ngaphezulu kwayo yonke loo nto, inyani yokuba nenkululeko kubaqhubi abakhulu yinto enokuba ngumdla omkhulu kwiinkampani ezininzi. Ke ngoko, apha ngezantsi siza kukuxelela yonke into malunga nesindululo seNFON kunye nento abanokuyinikela.
1 Yintoni i-Cloudya kwaye isebenza njani
2 Iindima eCloudya
3 Ifoni yefu yeNFON
4 Ufikelela njani kwiCloudya
Yintoni i-Cloudya kwaye isebenza njani
Yinkqubo yemfonomfono yelifu, ethi ivumela ukuba nonxibelelwano ngaphandle kwamaqhina kwinkampani. Enye yeenzuzo ezinkulu ezinikezelwa nguCloudya kukuba inokusetyenziswa kuzo zonke iintlobo zezixhobo, ezinjengePC, ilaptop okanye i-smartphone. Ngale ndlela, iifowuni okanye iifowuni zingenziwa ngokulula. Nangona ayisiyiyo kuphela into enokwenziwa enkosi kule nkonzo.
Ikuvumela ukuba ube nokusebenza ngokukuko kolwandiso lweofisi yakho rhoqo kunye nawe, epokothweni yakho. Ndiyabulela kule nkonzo kunokwenzeka fumana iifeksi ngokwamanani, kwi-smartphone yakho, naphi na apho ukhoyo. Ukongeza, banamagumbi enkomfa, ngokusekwe kwinyani yokwenyani. Ziyilelwe ukugcina iindleko zokuhamba kwaye zibe nentlanganiso ngale ndlela ngqo kwisikhangeli sekhompyuter.
Yonke le nto inokwenzeka ngenxa yomsebenzisi-oluhle ujongano. ICloudya yenzelwe ngendlela enokuthi bonke abasebenzi kwinkampani bakwazi ukuyisebenzisa kakuhle. Inombolo yefowuni eyahlukileyo kunye ne-inbox isetyenziselwa ukuqhagamshelana nomsebenzi ngamnye. Oku kwenza ukuba kube lula ukuyisebenzisa kuye nawuphi na umsebenzi.
Eminye yemisebenzi yayo sele ikhankanyiwe kwicandelo elidlulileyo, nangona iNFON ngokwayo yenza ukuba ifumaneke kubo bonke uluhlu olupheleleyo lwemisebenzi Ezibandakanyiweyo kwi-Cloudya, ezinokuthi zenze umdla kwiinkampani ezininzi. Olu luluhlu lwangoku lwemisebenzi ekhoyo:
Inkqubo yefowuni yamafuUkuhanjiswa kweefowuni okusekwe kumthombo, kwiifowuni zikaZwelonke nakwamanye amazwe, ifeksi ebonakalayo
Ulawulo lwefowuni: Ukudluliselwa kwefowuni, i-IVR, i-CLIP, i-CLIR, indlela yokufowuna, i-voicemail
Ukudityaniswa kwesixhoboIimenyu zefowuni
Iphakheji yesiceloIifowuni zenkomfa ezimodareyithiweyo, ukudityaniswa kwe-smartphone
Izicelo zonxibelelwano ngomnxeba: CTI
Isoftware eyongezelelweyoIphaneli yomsebenzisi
Oku kunika umbono olungileyo we izixhobo ezininzi kunye neenketho ezikhoyo kule nkonzo. Ngale ndlela, unxibelelwano lwenkampani luya kuguqulwa ngendlela elungileyo. Inkululeko engakumbi, kulula ukuyisebenzisa kunye namathuba amaninzi, avumela unxibelelwano olungcono ngawo onke amaxesha.
Ezi zezinye zeempawu ezinikezelwa yiNFON kunye neCloudya. Kukho imisebenzi eli-150 efumanekayo, ongayibona kule khonkco. Zizisombululo ezenzelwe iintlobo ezahlukeneyo zeenkampani, ezinje ngeehotele, izibhedlele, iibhanki, amaziko oshishino nezinye ezininzi. Zilungelelanisa ngokugqibeleleyo kuzo zonke iintlobo zamashishini.
Ifoni yefu yeNFON
Iingcali ezininzi sele zibona umnxeba wefu njengekamva kunxibelelwano. Okwangoku, siyayibona indlela ekufumana ngayo ubukho kwimarike, ngakumbi kwicandelo lezeshishini, apho kwenzeka khona utshintsho lwedijithali. Ukubheja ngomnxeba efini kuvumela inkampani ukuba ingaxhomekeki kubasebenzisi abakhulu. Le yinto enako cinga ukonga iindleko kuyo nayiphi na inkampani. Ukongeza, ngokubheja kwiinkonzo ezinje ngeCloudya, ufumana inkonzo ekhethekileyo kunye neyobungcali, ebonelela ngononophelo lomntu ngakumbi kuxhomekeke kwinkampani.
Elinye lamaqhosha kwilifu lokufowuna kukuba itekhnoloji ethembekileyo esebenza kakuhle kwaye ivumela inkampani ukuba ifumane iziphumo ezingcono. Njengoko unxibelelwano olululo lunikwa ngamaxesha onke, ngaphakathi nangaphandle. Ke kuya kuba lula ukuhlala unxibelelana kwaye ufumaneke kubaxumi, ngaphandle kokuphazamiseka ngexesha elithile. Enye yeenzuzo zayo kukuba nakwiinkampani ezincinci, ivumela ukuba nebhodi yokutshintsha, ukuphendula iminxeba evela kubaxhasi okanye kubathengi abanokubakho.
Kwakhona kufuneka gqamisa ubhetyebhetye obubonisayo, ngeendleko ezisezantsi, ukongeza kwimeko yokuhambisa iofisi kulula kakhulu ukuyenza ngale ndlela. Ukufikelela kule switchboard ebonakalayo kunikwa naphina emhlabeni, into ebaluleke kakhulu kubasebenzi ekufuneka behambe kakhulu ekusebenzeni komsebenzi wabo. Indlela yokufikelela nayo ilula, kuba kufuneka uqhagamshele isixhobo.
I-NFON ibekwe njengesisombululo seprimiyamu kweli candelo lentengiso. Isiqinisekiso somgangatho, sinikezela ngenkonzo elungileyo, ngexabiso elifanelekileyo lemali kwintengiso. Ukongeza, bavumela ukwenziwa kweendleko, kuba iifowuni zangaphakathi ezivela kwibhodi efanayo yokutshintsha kwaye phakathi kwabaxhasi basimahla. Into evumela iinkampani ukuba zonge kakhulu.
Ufikelela njani kwiCloudya
Kwezo nkampani zifuna ukwazi ngakumbi malunga CloudyaBanokuya kwiwebhusayithi yenkampani, kwikhonkco esele sikushiye. Nalu ulwazi olukhoyo malunga neenkonzo ezibandakanyiweyo kwiCloudya, ukongeza ekubeni kunokwenzeka ukuba ubone izibonelelo ezinikezelayo ngokuxhomekeke kuhlobo lwenkampani onayo. Ke unokwazi ngendlela elula kakhulu ukuba inokuba negalelo lini kwinkampani kwicandelo lezonxibelelwano, okanye ukonga iindleko ezichaphazelekayo ekubhejeni kuzo.
Kwelinye icala, ukuba unomdla, ungaqhagamshelana I-NFON ngokuthe ngqo kwiwebhusayithi yakho, ngolwazi olongezelelweyo malunga neCloudya, okanye kwimeko yokufuna ukusebenzisa iinkonzo zabo. Iqela lakho liya kuba nguwe oya kukukhokela kwinkqubo yokuqalisa ngale nkonzo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Cloudya: Eyona nkqubo yefowuni ilungileyo